Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » U-Atkins Kroll ujoyina iNkqubo yeHafa Adai yesithembiso
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGuam Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Isifungo se-Guam Håfa Adai
I-Guam Bureau Bureau (GVB) ibhengeze ukuba i-Atkins Kroll Inc. ithathe i-Håfa Adai Pledge (HAP) ngale mvakwemini e-AK Showroom eTamuning.
Isithembiso siqinisa isithembiso se-GVB sokugcina ilifa laso liphila kumbutho wonke.
Igumbi lokubonisa le-AK liya kuba yinxalenye yokunceda abahlali besiqithi kunye neendwendwe ukuba zifike apho zifuna ukuya khona.
Umsitho wokutyikitya uphawule ukuzibophelela ekugcineni ulwimi, inkcubeko kunye nezithethe zaseGuam.
“Njengenkampani endala yaseGuam, sizimisele kakhulu ekugcineni ulwimi, inkcubeko kunye nezithethe zesiqithi. Ukuthatha esi sibambiso kuqinisa isithembiso sethu sokugcina ilifa lethu liphila kumbutho wethu, utshilo uMongameli we-AK uWendi Hering. “Njengokuba iziqithi zethu zikhokelela ekubuyiseleni uqoqosho, sifuna uluntu lwethu ukuba lwazi ukuba siza kuba lapha onke amanyathelo ngendlela ebesinayo kule minyaka ili-107 idlulileyo. U-AK ulapha eGuam kwaye ulapha ebomini, ”wongeze watsho uHering.
"Siyavuya ukwamkela i-AK kwiHafa Adai Pledge familia," utshilo I-GVB UMlawuli wezoPhando ngezoKhenketho uNico Fujikawa. “Ziyinxalenye ebalulekileyo yokunceda abahlali beziqithi zethu kunye nabatyeleli ukuba bafike apho bafuna ukuya khona. Le nkqubo yesibambiso igqitha kumbuliso kaHafa Adai olula. Kufaka amaxabiso asisiseko okwenza Guam ayifani nezenzo zakho zemihla ngemihla. ”
Umsitho wokutyikitya uqukunjelwe ngeziphungo kubo abo bebekho.
I-Atkins Kroll, inkampani ye-Inchcape, ingoyena mhambisi phambili wezithuthi eGuam, kwiziQithi zeMntla Mariana naseMicronesia eyenza ukuba ibonelele ngoluhlu olupheleleyo lweemveliso kunye neenkonzo kulo mmandla. I-Atkins Kroll yeyona nkampani indala yaseGuam eyasekwa ngo-1914 kwaye imele iToyota, Lexus, BMW, Chevrolet, Toyota Rent A Car, ACE Rent a Car, kunye ne-AC Delco brand.
Isithembiso seHafa Adai lilitye lembombo lenkqubo yokubeka uphawu eluntwini eGuam Visitor Bureau. Inkqubo yeHafa Adai Pledge ikhule ngokuzinzileyo kwinani labathathi-nxaxheba kunye nomxholo wesithembiso somntu ngamnye ukusukela oko waqalayo ngo-2009. Ngaphezulu kwama-940 amashishini abucala, iiarhente zikarhulumente, imibutho engenzi nzuzo, imibutho, kunye nabantwana besikolo basekuhlaleni bathathe isibambiso, bemele ngaphezulu kwama-44,000 abantu apha nakumazwe aphesheya.